Mpanamboatra fandriana hopitaly electika dimy fampiasa tsara indrindra | Webian
Ny fandriana hopitaly miasa dimy dia manana lamosina, fitsaharana amin'ny tongotra, fanitsiana ny haavony, trendelenburg ary fiovan'ny toetr'andro trendelenburg. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny toerana misy ny lamosin'ny tongony sy ny tongotr'ilay marary dia ahitsy araka ny filan'ny marary sy ny filàn'ny mpitsabo, izay manampy amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny lamosina sy ny tongotra ary hampiroborobo ny fizotry ny rà. Ary ny haavon'ny haavon'ny fandriana mankany amin'ny gorodona dia azo ovaina amin'ny 420mm ~ 680mm. Ny zoro ny trendelenburg sy ny fanovana trendelenburg mivadika dia 0-12 ° Ny tanjon'ny fitsaboana dia tratra amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny toeran'ny marary manokana.
Fandriana ICU dimy fampiasa elektrika
Takelaka fandriana anti-fifandonana ABS azo esorina
ABS manamaivana fananganana mpiambina miaraka amin'ny fisehoana amin'ny zoro.
Casters fanaraha-maso afovoany afovoany,
Motera marika L&K na marika malaza sinoa
Haavon'ny haavon'ny fandriana
Halavany: 2090mm (farafara fandriana 1950mm) ， Sakany: 960mm (farafara fandriana 900mm).
Haavony: 420mm ka hatramin'ny 680mm (farafara fandriana ka hatramin'ny gorodona, esory ny hatevin'ny kidoro),.
Fialana sasatra mampiakatra zoro 0-75 °.
Ny fitsanganan'ny tongotra miala ny zoro 0-45 °.
Trendelenburg ary zoro Trendelenburg mivadika: 0-12 °.
6. Guardrails (fitaovana ABS)
Izy io dia mety amin'ny fikolokoloana sy fanasitranana marary, ampiasaina manokana amin'ny ICU.
1. Takelaka fandriana sy solaitrabe
Atsofohy amin'ny alàlan'ny farafara ny zoron'ny lohan-doha sy ny takelaka ary afatory amin'ny vodi-takelaka sy ny takelaka.
2. Trano fiambenana
Apetraho ny mpiambina, amboary ny visy amin'ny alàlan'ny lavaky ny tranom-baravarana sy ny fandriana, afatory amin'ny voanjo.
Tsindrio ny bokotra ankavia, ny fiakarana ankapobeny, ny haavon'ny halavan'ny fandriana dia 680cm
Tsindrio ny bokotra ankavanana, ny ankapobeny midina, ny haavon'ny ambany indrindra amin'ny fandriana dia 420cm
Tsindrio ny bokotra ankavia, mampiakatra ny habibiana am-pandriana, ny zoro max 45 ° ± 5 °
Tsindrio ny bokotra ankavanana, ny latabatra dia malemy hatrany mandra-pahatonga fisaka
Tsindrio ny bokotra havia, hiara-mientana ny vodin-damosina sy ny legrest
Tsindrio ny bokotra ankavanana, ny fatorian'ny fandriana ary iaraha-mivoaka ny legrest miaraka
Tsindrio ny bokotra havia, ny fiakaran'ny lohan'ny loha, ny zoro max 12 ° 2 2 °
Tsindrio ny bokotra ankavanana, ny fiakarany amin'ny lafiny tongotra, ny zoro max 12 ° 2 2 °
Guardrails: Atsangano ambony ny arofanina mandra-pihidy azy
Tsoahy ny tantanan'ny mpiambina, hidina ho azy ary miadana ny mpiambina.
3. Rehefa mampiasa ny arofanina sy ny fantsona fampidirana dia hidio mafy.
6. Raha ilaina ny mamindra ny farafara, voalohany, esory ny tsipika herinaratra, soloina ny tariby mpanera herinaratra, ary atsangano ny arofanina mba hialana amin'ny marary amin'ny fizotran'ilay fianjerana sy ratra. Avy eo avotsory ny freins casters, farafaharatsiny olona roa no miasa ny mihetsika, mba tsy ho voafehy ny lalana amin'ny fizotran-javatra, ka hiteraka fahavoazana amin'ny faritra simika, ary hanimba ny fahasalaman'ny marary.
Teo aloha: Fandriana fisaka B11-2
Manaraka: Fandriana hopitaly miasa dimy miaraka amin'ny ambaratonga mavesatra